NGOKUGQITHISILEYO: Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 Reveals - iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	NGAPHANDLE: U-Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 Uveza
NGAPHANDLE: U-Drew Struzan's Jaw-Dropping MondoCon 2017 Uveza
by UTrey Hilburn III Oktobha 30, 2017
by UTrey Hilburn III Oktobha 30, 2017 1,333 imbono
MondoCon phantse kuthi. Umbhiyozo womqokeleli we-behemoth uyehla nge-4 kaNovemba kunye ne-5 e-Austin, eTexas e-Austin American- Statesman kwaye asinakulinda. Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, sinee-gander kwezinye zezinto ezintle eziza noluhlu olumangalisayo lwamagcisa. Ukuvezwa nganye kuye kwamangalisa njengokugqibela. Izipaji zethu sele zingcangcazela kukoyika inani lezinto esele zifuneka ukuba sizongeze kwingqokelela yethu.
Kulo nyaka, uDrew Struzan odumileyo uzakubakho kuluhlu lwamagcisa esele lukhona kwaye asikwazi ukuzibamba, nina bantu. U-Struzan unoxanduva lazo zonke iintlobo zemifanekiso ebhiyozelwayo kule minyaka idlulileyo, ukusuka kwi-Star Wars ukuya e-Indiana Jones ukuya kwi-Blade Runner (ukubiza ngambalwa) lo mfo ngumlandeli wokuhamba. Ukuzimasa kwakhe kwi-MondoCon yalo nyaka kulunge kakhulu.
Asinakonwaba ngakumbi xa sinokunikwa ithuba lokuba sabelane ngokukodwa ngezi-prints ezimbini uStruzan azakuza nazo. Ewe kunjalo, zombini ziyamangalisa kwaye nina bantu nizakufuna ukuba nibe nesibini, ngokuqinisekileyo sikwenzile. Ngokukrakra, i-monster kaFrankenstein kunye nomtshakazi wakhe abakhange bajonge ngcono.
IMondoCon ngumbhiyozo wayo yonke into iMondo eyithandayo, kubandakanya iimuvi, ubugcisa, iicomic, umculo, iithoyi kunye nokutya. Yimpelaveki ekhethwe ngabalandeli engqondweni, inamagcisa amangalisayo kunye nabenzi abasuka macala onke Ihlabathi, iipaneli, ukuhlolwa, iilori zokutya, amanqaku aphilayo kunye neziganeko ezisebenzayo.
“IMondoCon ngumbhiyozo wayo yonke into ayithandayo uMondo, kubandakanya imiboniso bhanyabhanya, ubugcisa, iihlaya, umculo, izinto zokudlala, kunye nokutya, kwaye sonwabile ukwabelana nothando lwethu ngesixeko saseAustin ngokubamba indibano kanye edolophini eAustin American-Statesman . ” Utshilo umphathi wegalari kunye neMicimbi yezeMondo, uDavid Rancatore. Indawo ebisetyenziselwa ukugcina oomatshini bokushicilela bephephandaba kwaye yindawo entle kubo bonke amagcisa, ababonisi, abazimeleyo, kunye neepaneli kule mpelaveki. Siyavuya ukusingatha imiboniso yethu yangokuhlwa eAlamo Drafthouse eSouth Lamar, ikhaya laseMondo iminyaka emininzi, kunye nabalandeli bethu ukuba bonwabele amava amyoli e-Drafthouse.
Ngolwazi oluthe kratya kuzo zonke izinto iMondo kunye neMondoCon, intloko ngaphezulu kwemondotees.com. Yabona apho, bantu!
UFrankenstein nguDrew Struzan
Ishicilelwe yi-DL Screenprinting
Umtshakazi kaFrankenstein nguDrew Struzan